Accueil > Gazetin'ny nosy > Antanifotsy: Olona 2 matin’ny lozam-pifamoivoizana
Antanifotsy: Olona 2 matin’ny lozam-pifamoivoizana
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray ny lalàm-pirenena faha 7, omaly maraina. Teo anelanelan’ny fokontanin’Ampitatafika sy ny fokontan’Ilompona, ao anatin’ny distrikan’Antanifotsy, no nitrangan’izay lozam-pifamoivoizana izay. Fiara mpitatitra iray feno olona no nifandona tamina fiara hafa rehefa nandeha mafy. Vokany, olona 2 no fantatra fa maty teo no ho eo ary am-polony kosa ireo naratra mafy. Marihana fa nitondra mpandevina niainga teto Andrenivohitra ary saika hihazo an’Andavabato ity fiara niharan-doza ity. Mbola tsy fantatra aloha hatreto raha olana ara-teknika na fahadisoana teo amin’ny mpamily no antony nahatonga izao lozam-pifamoivoizana mahatsiravina izao satria dia ireo mpandeha tao anatin’ny fiara no afaka mijoro vavolombelona.
Mpitondra fanjakana: Tsy mahay afa-tsy ny mandrebireby saim-bahoaka
Zavatra iray hita ho mahazo vahana amin’izao volana maromaro mialohan’ny fifidianana filoham-pirenena izao ny fanodinana na fandrebirebena ny saim-bahoaka, indrindra fa eo amin’ny resaka pôlitika. Amin’ny ankapobeny, fitaovana roa no ampiasain’ny mpitondra sy ny mpanao pôlitika amin’izany fanodinana sy fandrebirebena ny saim-bahoaka izany dia ny gazety sy ny haino aman-jery ary ny tambazotran-tserasera sosialy. Manjaka ny filalaovana vahoaka amin’izao fotoana izao, tsy misy fitsaharany ny famafazana lainga ny olom-pirenena ary ny fanodinana ny saim-bahoaka any amina ady hevitra diso. Raha jerena amin’ny fomba fijery mahitsy dia ireo mpitondra fanjakana sy ireo mpanao pôlitika rehetra mpiara-dia sy manohana azy no tompon-daka eo amin’izay fandrebirebena saim-bahoaka izay. Ny olana lehibe iray teto amin’ity firenena ity, tao anatin’ireo fitondrana nifandimby, dia tsy mety miaiky ny zava-misy marina ny mpitondra fanjakana ary anisan’zany mazava ho azy mpitondra HVM. Tsy mety miaiky mihintsy ireo mpanao pôlitika mitantana ny firenena ankehitriny fa amin’ny ankapobeny dia tsy misy mandeha amin’ny laoniny intsony ny raharaham-pirenena, eo amin’ny lafiny pôlitika, toekarena ary sosialy. Ny zavatra asesik’ireo mpitondra hatrany ao anatin’ny sain’ny Malagasy dia ny hoe mizotra araka ny tokony ho izy ny fampandrosoana ny firenena ary mahomby ny ady atao amin’ny fahantrana. Tsiahivina fa nanaitra ny olom-pirenena, indrindra fa ny mpanara-baovao ny teny nataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonariampianina, nandritra ny lanonana fifampiarahabana nahatratra ny taona natao teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, izay nilaza fa tena nahitam-bokany ny ady amin’ny fahantrana teto Madagasikara ka nidina hatrany amin’ny 72 isan-jato sisa ny tahan’ny fahantrana eto amintsika. Fihomehezana moa ny an’ireo mpanara-baovao tamin’io fotoana io satria ny rehetra dia samy mahita fa tsy mitombina na oviana na oviana ny teny nataon’ny filoham-pirenena fa ny mifanipaka amin’izany aza no zava-misy eto amin’ity Madagasikara ity. Mbola nandiso izay resaka nataon’i Hery Rajaonarimampianina izay ihany koa ny tatitra farany navaokan’ny Banky iraisam-pirenena izay namoaka fa ny 92 isan-jaton’ny Malagasy amin’izao fotoana izao no miaina ao anatin’ny fahantrana. Eo amin’ny resaka sosialy, miha potika ny fiaraha-monina, tsy mitsahatra mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra ary mitombo isan’andro ny isan’ireo tsy manan-kialofana. Eo amin’ny lafiny ara-toekarena moa dia tsy resahina intsony ny fitotongan’ny vola malagasy izay mampidangana ny vidim-piainana, isan’izany ny vidin-tsolika izay mampimenomenona ny mpampiasa fiara rehetra. Na eo olana goavana iainan’ny firenena izany dia zavatra tokana ihany no hasesika ny mpitondra ao anatin’ny sain’ny Malagasy : “Efa miroso mankany amin’ny fandrosoana izao ny firenena ary efa ahitam-bokany ny ady amin’ny fahantrana”. Fandreberibena saim-bahoaka fara-tampony no ataon’ny fitondrana HVM ankehitriny ary manampy azy ireo amin’izany filalaovana vahoaka izany ireo solombavambahoaka sy mpanao pôlitika jamban’ny malety izay minia tsy mahita ny zava-misy marina eto amin’ny firenena. Amin’izao fotoana izao koa dia mandeha any anaty tambazotran-tserasera sosialy any indray ny fanodinana saim-bahoaka amin’ny endriny hafa. Misy ireo olona miezaka mandresy lahatra ny vahoaka fa tsy ny filoham-pirenena no olana na antony mahatonga ny raharaham-pirenena tsy mandeha araka ny tokony ho izy fa ireo olona manodidina azy ao an-dapa. Ezahina diovina i Hery Rajaonarimampianina amin’izao volana maromaro mialohan’ny fifidianana izao ka ny tanjona mazava ho azy dia ny mbola hifidianan’ny mpifidy azy amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Mety ho marina tokoa anefa izany satria malaza ho tsy manana hazon-damosina ingahy Hery Rajaonarimampianina. Tsara anefa ny manamarika fa nisy ny manam-pahaizana vahiny iray no nilaza tany aloha tany fa ny mpitondra firenena izay tsy mahay misafidy an’ireo mpiara-miasa aminy akaiky dia efa naman’ny tsy mahay mitondra firenena ihany.